हिजो ‘भ्वाईस् अफ नेपाल’बाट बाहिरिएकी एलिनाको सबैलाई रु वाउने कथा – Gazabkonews
हिजो ‘भ्वाईस् अफ नेपाल’बाट बाहिरिएकी एलिनाको सबैलाई रु वाउने कथा
हिजो ‘भ्वाईस् अफ नेपाल’बाट बाहिरिएकी एलिनाको सबैलाई रु वाउने कथा, लेभर काम गरेर दिनको ७०० कमाउने एलिनालाई सबै कोचहरुले नराम्रो प्रतिक्रिया दिएपछि तृष्णा हिस्स परिन्, आफ्नो टिमकी गरिब निमुखा किशोरीमाथी कोचहरुले पेलेको भन्दै भावुक बनिन् तृष्णा, भ्वाइसका कोचहरुले किन यस्तो विबादास्पद प्रतिक्रिया दिए, त्यो पनि तृष्णाले बहिनी बनाएकी यि गरिब चेलीलाई ? के गरिब भएकै कारण भ्वाइसबाट फलिएकी हुन् एलिना ? के गरिबको प्रतिभाको कदर हुँदैन यहाँ ?
घर बनाउने मि स्त्री काम गर्ने खोटांग कि एलिना उदास अहिले नेपालको एक कार्यक्रम ” द भ्वाईस् अफ नेपाल ” सिजन ३ मा छानिएकी छिन। राम्रो स्वर भएको कारणले एलिना ले अहिले सम्म धेरै गीतहरु बजार मा ल्याउने तयारी मा छिन।एलिना मा यस्तो स्वर छ कि उनको स्वरमा जो कोहि पनि फिदा हुन्छन। एलिना को घरको स्थिति कम्जोर भएको कारण ले उनले यो कलाकारिता क्षेत्र लाई अगाडी बढाउन सकेकी छैनन्।